၂၁ – အတ်ထိပစ်စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (7 of 8) – Dhamma Training Center
၂၁ – အတ်ထိပစ်စယော Atthi Paccayo (Presence condition) (7 of 8)
အတ်ထိပစ်စညျး၏ အပိုငျး ၇-ပိုငျး
၁။ စတ်တာရော ခန်ဓာ အရူပိနော အညမညံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (နာမျခန်ဓာလေးပါး)
၂။ စတ်တာရော မဟာဘူတာ အညမညံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (မဟာဘုတျ ၄ပါး)
၃။ သွက်ကန်တိက်ခဏေ နာမရူပံ အညမညံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (နာမျရုပျ)
၄။ စိတ်တစတေသိကာ ဓမ်မာ စိတ်တသမုဋ်ဌာနာနံ ရူပါနံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (စိတျစတေသိကျ)
၅။ မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (မဟာဘုတျနှငျ့ဥပါဒါရုပျ)
၆။ စက်ခာယတနံ စက်ခုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမ်ပယုတ်တကာနဉ်စ ဓမ်မာနံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (အာယတန)
၇။ ယံ ရူပံ နိဿာယ မနောဓာတု စ မနောဝိညာဏဓာတု စ ဝတ်တန်တိ၊ တံ ရူပံ မနောဓာတုယာ စ မနောဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမ်ပယုတ်တကာနဉ်စ ဓမ်မာနံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော။ (ဝတ်ထုရုပျ)
(၁-ပထမ) “စတ္တာရော ခန္ဓာ အရူပိနော အညမညံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော” (နာမ်တရားက နာမ်တရားကို ကျေးဇူးပြုသည်။)
နာမ်ခန္ဓာ-၄ ပါးရှိပါသည်။ ၎င်းင်းတို့မှာ ၁-ဝေဒနက္ခန္ဓာ ၂-သညက္ခန္ဓာ ၃-သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ၄- ၀ိညာဏက္ခန္ဓာတို့ ဖြစ်ပါသည်။
နာမ်ခန္ဓာသုံးပါးက တစ်ပါးကို၊ နာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးက နှစ်ပါးကို ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အတူတကွ ဖြစ်နေသည့်အခိုက် အတ္ထိသတ္တိနှင့် ကျေးဇူးပြုသည်။
“တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော” သုံးပါးသော နာမ်ခန္ဓာက တစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာဖြစ်သည့် သညာက္ခန္ဓာကို ခဏမခြား ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ပမာအားဖြင့် ဝေဒနက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာနှင့် ၀ိညာဏ္ခန္ဓာက သင်္ခါရက္ခန္ဓာကို ခဏမခြား ကျေးဇူးပြုခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
“ဒွေ ခန္ဓာ ဒွိန္နံ ခန္ဓာနံ အတ္ထိပစ္စယေနပစ္စယော” တစ်ဖန် နှစ်ပါးသောနာမ်ခန္ဓာက ကျန်နှစ်ပါးသော နာမ်ခန္ဓာအား ခဏမခြားကျေး ဇူးပြုခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ပမာအားဖြင့် ဝေဒနက္ခန္ဓာနှင့် သညာက္ခန္ဓာတို့က ၀ိညာဏ္ခန္ဓာကနှင့် သင်္ခါရက္ခန္ဓာကို ခဏမခြားကျေး ဇူးပြုခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။
ဥပမာ လောဘစိတ်ဖြစ်လာပါက လောဘတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်ဟု ထင်တတ်ကြပါသည်။ အမှန်မှာမူ သူနှင့်ဆိုင်ရာ စေတသိက်များစွာက အတူတကွ ဖြစ်ကြပါသည်။ လောဘမူစိတ် (၈)ပါး ရှိပါသည်။ ထိုထိုစိတ်တို့ ဖြစ်တိုင်း စေတသိက် (၁၈)ပါးမှ (၂၁) ပါးအထိ ဖြစ်ခွင့်ရှိ၏။ မောဟမူစိတ် (၂)ပါး ရှိပါသည်။ ထိုထိုစိတ်ဖြစ်တိုင်း စေတသိက် (၁၅) ပါးအထိ ဖြစ်ခွင့်ရှိပါသည်။
ထိုလောဘမူစိတ် (၈)ပါး မောဟမူစိတ်(၂)ပါးနှင့် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ စေတသိက်တို့သည် အပြန်ပြန် အလှန် လှန် အတ္ထိသတ္တိနှင့် ကျေးဇူးပြုနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာတစ်ပါးက ပစ္စယအကြောင်းဖြစ်ပါက အခြားနာမ်ခန္ဓာတို့က ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုး ဖြစ်သွားပါသည်။
တစ်ပါးဟူသည် မောဟမူစိတ်သော်လည်းကောင်း၊ ဖဿသော်လည်းကောင်း၊ ဝေဒနာသော်လည်း ကောင်း၊ သညာသော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ ၀ိပဿနာ၊ သမထတရားများအားထုတ်ပြီး ဉာဏ်အဆင့်၊ ဈာန် အဆင့် မြင့်မားလာကြသည့် ယောဂီများက စာပေပရိယတ္တိ၌ လာရှိသည့် ဤသဘောကို အနည်းငယ်ဖြစ် စေသိရှိနိုင်ကြပါသည်။ ပမာအားဖြင့် ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ကြသည့် ယောဂီများကလည်း သူတို့ ကာလ ရှည်ကြာ မကျိုးမပေါက် မပျောက်မကြားအောင် ‌ဆောက်တည်လာခဲ့သည့် မိမိတို့၏သီလကို အောက်မေ့ဆင်ခြင် လျှင် စိတ်ဝယ်တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ကာ ငြိမ်းအေးလာသည်ကို လက်တွေ့သိကြပါသည်။ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုပွားနေပါက ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ငြိမ်းအေးလာပါသည်။ အနုသယကိလေသာ၏သတ္တိကြောင့် ဒေါသစိတ်ဖြစ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် တည်း စိတ်ထဲတွင်သာမက ခန္ဓာကိုယ်၌လည်း ပူလောင်လာသည်ကို လက်တွေ့နားလည်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နက်နဲလွန်းပါသည်။ လောက၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်သာ မပွင့်ထွန်းခဲ့ပါက တစ်ပါးတည်းသာဟု ထင်မှတ်ယူဆ မိကြမည်မှာ ဧကန်မုချပေတည်း။ ယခုကဲ့သို့ Presence condition ဖြင့် အပြန်အလှန် အထောက် အကူပြုနေခြင်း ကိုပင် အတ္ထိပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်းပေတည်း။
(၂-ဒုတိယ) “စတ္တာရော မဟာဘူတာ အညမညံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော”။ (မဟာဘုတ် ၄-ပါး) (ရုပ်က ရုပ်ကို ကျေးဇူးပြုသည်)
မဟာဘုတ် ၄-ပါး ရှိပါသည်။ ပထ၀ီဟူသည် “မာတဲ့သဘော၊ ပျော့တဲ့သဘော” တေဇောဟူသည် “ပူသည့် သဘော၊ အေးသည့်သဘော” အာပေါဟူသည် “ဖွဲ့စည်းသည့်သဘော” ၀ါယောဟူသည် “တွန်းကန် လှုပ်ရှားသည့် သဘော” တို့ကလည်း တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး အပြန်ပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုကာ အတ္ထိပစ္စည်း ဏမနျနညခန ခသညိငအငသည ဖြင့် ကျေးဇူးပြုနေပါသည်။
“ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ္ဏန္နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော တယောမဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ၊ ဒွေမဟာဘူတာ ဒွိန္နံမဟာဘူတာနံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော”
၁-ကမ္မဇမဟာဘုတ်၊ ၂-စိတ္တဇမဟာဘုတ်၊ ၃-ဥတုဇမဟာဘုတ်နှင့် ၄-အာဟာရဇမဟာဘုတ် ဟူ၍ လာရှိ ပါသည်။
သတ္တ၀ါတို့၏ခန္ဓာ၌ရှိသည့် ကမ္မဇပထ၀ီ၊ ကမ္မဇတေဇော၊ ကမ္မဇ၀ါယောနှင့် ကမ္မဇအာပေါလေးပါးက အပြန် အလှန် ကျေးဇူးပြုနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္မဇမဟာဘုတ် ဓါတ်တစ်ပါးပါး ချွတ်ယွင်းပျက်ပြားပါက သေနိုင်သည်။
ဥတုဇမဟာဘုတ်မှာလည်း ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယောတို့ပေတည်း။ အပူ၊ အအေးလွန်ကဲ လာပါက ရုပ်ကဖေါက်ပြန်ပြီ၊ အပူအအေး မျှတနေပါက ရုပ်က ချက်ခြင်း လန်းဆန်းလာတတ်ပါသည်။
အာဟာရဇမဟာဘုတ်မှာလည်း ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယောတို့ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ ကြိုက်နှစ် သက်သည့် အစာအာဟာရများ ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိလာပါက အလွန်ပင်ပြုံးပျော် ကျေနပ်သွားခြင်းမှာ အာဟာ ရဇမဟာဘုတ်၏ သတ္တိဖြစ်သည်။ မိမိရောဂါနှင့်တည့်သည့် ဆေးကိုသောက်သုံးခွင့်ရလျှင် ချက်ချင်းပင် လန်းဆန်း လာသည်မှာလည်း ထိုနည်းတူ ဖြစ်သည်။ မဟာဘုတ်လေးပါးသည် ရှိနေသည့်အခိုက်၌ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြု သဖြင့် အတ္ထိပစ္စည်းဖြစ်၏။
(၃-တတိယ) ” သြက္ကန္တိက္ခဏေ နာမရူပံ အညမညံ အတ္ထိပစ္စယေန ပစ္စယော”။ (နာမ်ရုပ်နှစ်ပါးက နာမ်ရုပ် နှစ်ပါးကို ကျေးဇူးပြုသည်။)
သြက္ကန္တိက္ခဏဟူသည် ပဋိသန္ဓေတည်ခိုက်ကို ဆိုလိုပါသည်။ ဤသို့သန္ဓေတည်သည့် ခဏ၌ နာမ်နှင့် ရုပ်တို့သည် အပြန်အလှန် သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
ကလလရေကြည် တည်သည့်အခိုက် ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်ပါလာသည်။ ၀တ္ထုဒသက ကလပ်ပါလာသည်။ ထို ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်က ပဋိသန္ဓေစိတ်၏ တည်ရာမှီရာဝတ္ထုရုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသဖြင့် ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် ဟဒယ ၀တ္ထုရုပ်တို့က သဟဇာတ Born together. ပြိုင်တူ ဖြစ်လာကြပါသည်။
ဘ၀၏အစကနဦး၌ ကံကဖန်တီးပေးလိုက်သည့် ရုပ်နာမ်အစုံ ရှိနေသည့်အခိုက်တွင် အပြန်အလှန် ကျေးဇူး ပြုသောကြာင့် အတ္ထိပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်။
အမိဝမ်းထဲ၌ ပဋိသန္ဓေတည်သည့် သတ္တ၀ါတို့၌ နာမ်တရားအဖြစ် ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်စိတ်နှင့် စေတသိက် (၃၃)ပါး။ ရုပ်တရားအဖြစ် ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ၀တ္ထုဒသကဟူသော ကံကြောင့်ဖြစ်သည့် ကမ္မဇရုပ် ကလာပ် သုံးစု (သုံးစည်း ) တို့ တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ကြပါသည်။
ကာယဒသက = ကာယပသာဒ ဇီဝီတ အဋ္ဌကလာပ်ရုပ် ကာယဒသက။
ဘာဝဒသက = ကမ္မဇကလာပ် ကိုးစည်း၌ပါဝင်သည့် အထီး အမ ခွဲခြားစေသည့် ဣတ္ထိဘာဝ ဒသက ကလာပ် သို့မဟုတ် ပုမ္ဘာဝဒသကကလာပ် ဟူသော ဘာဝဒသက။
၀တ္ထုဒသက = ဟဒယ၀တ္ထုရုပ် ဇီဝိတအဋ္ဌကလာပ်ရုပ်ဟူသော ၀တ္ထုဒသကတို့ပေတည်း။ ပဋိ သန္ဓေခဏတွင် ရုပ်နာမ်တို့ကလည်း ရှိနေသည့်အခိုက်၌ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုသဖြင့် အတ္ထိပစ္စည်းဖြစ်၏။
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရာဇဂြိုလ်မြို့အနီး ဣန္ဒကူဋတောင်၌ရှိသည့် ဣန္ဒကနတ်ဘီလူး၏ နတ်ဗိမာန်တွင် သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်က ဗိမာန်ရှင်ဖြစ်သည့် နတ်ဘီလူးက ဘုရားရှင်ထံပါး မေးလျှောက်သည်မှာ –
“အရှင်ဘုရား ပွင့်တော်မူသမျှ ဘုရားအဆူဆူတိုင်းကပဲ ရုပ်ကို “အသက်, ဇီဝ, အတ္တဆိုတာ မရှိဘူး” လို့ချည်း ဟောတော်မူကြပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီသတ္တ၀ါတွေဟာ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ရရှိနိုင်မလဲ၊ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အရိုးတွေ၊ အသားဆိုင်တွေဆိုတာကရော ဘယ်ကနေ ရောက်လာပါသလဲ၊ ဒီသတ္တ၀ါဟာ ဘာကြောင့် တောင်ရဲ့လှိုင်ခေါင်းသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ အမိဝမ်းတိုက်မှာ ကိန်းအောင်းနေနိုင်ပါသလဲ”ဟု မေးလျှောက်၏။ (ညွှန်း-သဂါထာဝဂ္ဂ၊ ယက္ခသံယုတ်-၂၀၈)
(၁) ပထမံ ကလလံ ဟောတိ = ပထမသတ္တာဟ (ရက်သတ္တပတ်)မှာ ကလလရေကြည်ဖြစ်တယ်။
(၂) ကလလာ ဟောတိ အဗ္ဗုဒံ = အဲဒီနောက် ဒုတိယပတ်မှာ အမြှုပ်ကလေးဖြစ်တယ်။
(၃) အဗ္ဗုဒါ ဇာယတေ ပေသိ = အဲဒီနောက် တတိယပတ်မှာ နီနီထွေးထွေး အသားတစ်ကလေး ဖြစ်တယ်။
(၄) ပေသိ နိဗ္ဗတ္တတေ ဃနော = အဲဒီနောက် စတုတ္ထပတ်မှာ ခပ်မာမာအသားတုံးကလေး ဖြစ်လာ တယ်။
(၅) ဃနာ ပသာခါ ဇာယန္တိ = အဲဒီနောက် ပဉ္စမပတ်မှာ ခေါင်း, ခြေနှစ်ဘက်၊ လက်နှစ်ဘက် ဖြစ်မည့် နေရာငါးခုမှာ ခက်မငါးဖြာလို့ခေါ်တဲ့ အဖုကလေးငါးခု ဖြစ်လာတယ်။
(၆) ကေသာ လောမာ နခါပိစ = နောက်တော့ ဆံပင်, မွေးညှင်း, ခြေသည်း, လက်သည်းစတဲ့ အင်္ဂါရပ် အစိတ်အပိုင်းတွေလည်း အခါအားလျော်စွာ လူ့အင်္ဂါရပ်စုံအောင် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်”ဟု မြတ်စွာဘုရားရှင်က မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။
ဘ၀ဖြစ်တည်မှုအပေါ် ဗုဒ္ဓစာပေရှုထောင့်နှင့် ဆေးသိပ္ပံအမြင်
ယနေ့ဆေးပညာရှင်များ အပါအ၀င် လူသားများစွာက အမိအဖတို့၏ ဗီဇသွေးနှစ်မျိုးတို့ ပေါင်းစပ်ရာမှ လူဖြစ်လာသည်ဟု မှတ်ထင်ထားကြပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာကျမ်းများအလိုအရမှာမူ လူတစ်ယောက်ဘ၀တစ်ခု၌ ပဋိသန္ဓေစတင် ဖြစ်တည်နိုင်ရေး အတွက် (၁) အမိအဖတို့ ဗီဇသွေးနှစ်ခု ပေါင်းဆုံမိခြင်း၊ (၂) အမိရဲ့သားအိမ်က လစဉ် စွန့်ပစ်ရမည့် ဥတု သွေးညစ်တို့ ပယ်စွန့် သန့်စင်ပြီးချိန်ဖြစ်ခြင်း၊ (၃) ဘ၀ဟောင်းမှ ဘ၀သစ်ကို ကူးပြောင်းဖြစ်ပေါ်မည့် ဂန္ဓဗ္ဗခေါ်သည့် ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်မျိုးစေ့လေး ရှေးရှုတည်ခြင်းဟူသော အင်္ဂါရပ်သုံးပါး စုံညီမှသာ သတ္တ၀ါတို့၏ ဘ၀သစ်တစ်ခု ပဋိသန္ဓေနေမှု စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ထိုသုံးပါးထဲက “ဂန္ဓဗ္ဗဓာတ်”ဟူဆိုသော အတိက်ကံ၏ သတ္တိအရ ဘ၀သစ်တစ်ခုတွင် ပဋိသန္ဓေ ဖြစ်တည်မည့် ‘ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်နှင့် ကမ္မဇရုပ်’တို့၏ မျိုးစေ့ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်နှင့် ကမ္မဇရုပ်တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကမ္မသတ္တိဓာတ်တစ်ခုကိုပင် ဂန္ဓဗ္ဗဓာတ်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဂန္ဓဗ္ဗဓာတ်၌ ကံပါရမီ တို့၏ သတ္တိသည်လည်းကောင်း၊ ကံကောင်းခြင်း၊ ဉာဏ်ကောင်းခြင်းတို့၏ အခြေခံတို့သည်လည်းကောင်း ပါဝင်၏။
အမိအဖတို့၏ ဗီဇသွေးနှစ်ခု၊ ဂန္ဓဗ္ဗဓာတ်နှင့် စင်ကြယ်သည့် အမိ၏သားအိမ်ဟူသော အကြောင်းတရားတို့ ဆုံမိသည်နှင့် ပဋိသန္ဓေဖြစ်ချိန်တွင် နာမ်တရားအဖြစ် ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်စိတ်နှင့် စေတသိက် (၃၃)ပါး၊ ရုပ်တရား အဖြစ် ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ၀တ္ထုဒသကဟူသော ကမ္မဇရုပ် ကလာပ်သုံးစုတို့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ကြ ပါသည်။
ပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေး ‘ဥပါဒ်’ပြီး ‘ဌီ’ ဟူသောအခိုက်ကို ရောက်ချိန်ကစပြီး ဥတုကြောင့်ဖြစ်သည့် ဥတုဇရုပ် တို့ကလည်း ခဏမစဲ စိတ်တစ်ခဏ အချိန်တိုင်း၌ မပြတ်တရစပ် ဖြစ်နေပါသည်။ ပဋိသန္ဓေ နောင် ပထမ ဘ၀င်စိတ် ကလေး စဖြစ်ချိန်ကစပြီး စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် စိတ္တဇရုပ်တို့လည်း ဖြစ်လာပါသည်။
ပထမဆုံး ပဋိသန္ဓေစပြီး ဖြစ်ချိန်မှသည် ရက်သတ္တတစ်ပတ်စာအချိန်အတွင်း၌ သန္ဓေသားဟူသော ကလလရေကြည် ကလေးမျှပင်ပဲ ရှိပါသေးသည်။ အရွယ်ပမာဏကလည်း ၀မ်းတွင်းမွေး ဆိတ်သားငယ်၏ အမွေးမျှင်ကလေးတစ်ချောင်းကို ဆီထဲနှစ်ပြီး ခါထုတ်လိုက်သောအခါ ထိုအမွေးမျှင်လေး၏ထိပ်၌ ကပ်ကျန်နေမည့် ဆီကြည် ပမာဏမျှလောက်သာရှိ၏။
သို့သော် ထိုသဘာဝသတ္တိတွင် ဘ၀င်စိတ်နှင့် စေတသိက်ဟူသော နာမ်တရားများ၊ ကမ္မဇရုပ်၊ ဥတုဇရုပ်၊ စိတ္တဇရုပ်ဟူသော ရုပ်သုံးပါးရှိနေ၏။
ထို့နောက် ဒုတိယ ရက်သတ္တပတ်ရောက်သောအခါ ဆီကြည်ကလေးမှသည် “အမြှုပ်” ကလေးအဖြစ် ပြောင်းလာသည်။ ဤအချိန်အထိလည်း ရုပ်က အထက်၌ပြခဲ့သည့် သုံးပါးသာ ရှိသေးသည်။
တတိယ ရက်သတ္တပတ်ရောက်သောအခါ အမြှုပ်ကလေးမှသည် သွေးနီခဲလေး “သားတစ်” ဖြစ်လာသည်။ သားတစ်ဆိုသော်လည်း အသားတုံးပမာ မာမာခဲခဲ မဟုတ်သေးဘဲ၊ ဂျယ်လီပမာ သွေးပျစ်ခဲခဲလေးသာ ရှိသေး သည်။ ဤတတိယပတ်ရောက်သောအခါ မိခင်စားသောက်သည့် အစားအစာများကတစ်ဆင့်ရသည့် သြဇာဓာတ်က သန္ဓေသားလောင်းအတွက် အာဟာရဇရုပ် စတင်ဖြစ်လေသည်။
ထိုကာလမှစ၍ ရုပ်လေးမျိုးစုံပြီး၊ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရအကြောင်းတရားလေးမျိုးလုံး ပေါင်းဆုံမိပြီဖြစ် သကဲ့သို့ အာဟာရလေးမျိုးလုံးလည်း ပြည့်စုံလာပါသည်။ (အာဟာရလေးမျိုးဟူသည် ၁။ အတိတ်ကံစေတနာက စေတနာဟာရ ၂။ ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်က ၀ိညာဏာဟာရ ၃။ အာရုံနှင့် တွေ့ထိတာက ဖဿာဟာရ ၄။ မိခင် ထံပါးကရသည့် သြဇာဓာတ်က ရုပ်အာဟာရတို့ ဖြစ်ပါသည်။)
ထမင်းလုတ်၊ ဟင်းလုတ်ထဲ၌ပါသည့် သြဇာဓာတ်ကလေးများက အာဟာရဇရုပ်ကို ဖြစ်စေတတ်သည့် ဇနကသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပေးပါသည်။ ကမ္မဇရုပ်၊ စိတ္တဇရုပ်၊ ဥတုဇရုပ်တို့က ဥပထမ္ဘကသတ္တိဖြင့် ထောက်ပံ့ ကူညီပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် “ကဗဠီကာရော အာဟာရော = သြဇာဟုခေါ်သော အာဟာရဓာတ်ကလေးသည်။ ဣမဿ ကာယဿ = ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံး (ရုပ်လေးမျိုးလုံး)ကို။ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော = အာဟာရသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်းပေတည်း။”
စတုတ္ထပတ်တွင် အဆိုင်အခဲ ခပ်မာမာကလေး ဖြစ်လာသည်။
ပဉ္စမပတ်တွင် ခက်မငါးဖြာ (ခေါင်း၊ လက်နှစ်ဘက်၊ ခြေနှစ်ဘက်) ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် အဖုလေး ငါးဖု ပေါ်လာပါသည်။
ထို့နောက် ရက်သတ္တ (၇)ပတ်မြောက်ခန့်ကစပြီး မျက်စေ့၊ နား၊ နှာစသည့် အင်္ဂါတို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ရက်သတ္တ(၁၁)ပတ်ခန့်ရောက်ချိန်တွင် ဆံပင်၊ မွေးညှင်း၊ ခြေသည်း၊ လက်သည်းတို့ပါ စုံလင်လာတော့သည်။
( ညွှန်း – ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) လူတိုင်းအတွက် ပဋ္ဌာန်း)
အတ်ထိပစ်စညျး၏ အပိုငျး ၇-ပိုငျး unicode
(၁-ပထမ) “စတ်တာရော ခန်ဓာ အရူပိနော အညမညံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော” (နာမျတရားက နာမျတရားကို ကြေးဇူးပွုသညျ။)
နာမျခန်ဓာ-၄ ပါးရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးငျးတို့မှာ ၁-ဝဒေနက်ခန်ဓာ ၂-သညက်ခန်ဓာ ၃-သင်ျခါရက်ခန်ဓာနှငျ့ ၄- ဝိညာဏက်ခန်ဓာတို့ ဖွဈပါသညျ။
နာမျခန်ဓာသုံးပါးက တဈပါးကို၊ နာမျခန်ဓာနှဈပါးက နှဈပါးကို ကြေးဇူးပွုခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။ အတူတကှ ဖွဈနသေညျ့အခိုကျ အတ်ထိသတ်တိနှငျ့ ကြေးဇူးပွုသညျ။
“တယော ခန်ဓာ ဧကဿ ခန်ဓဿ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော” သုံးပါးသော နာမျခန်ဓာက တဈပါးသော နာမျခန်ဓာဖွဈသညျ့ သညာက်ခန်ဓာကို ခဏမခွား ကြေးဇူးပွုခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။ ပမာအားဖွငျ့ ဝဒေနက်ခန်ဓာ၊ သညာက်ခန်ဓာနှငျ့ ဝိညာဏ်ခန်ဓာက သင်ျခါရက်ခန်ဓာကို ခဏမခွား ကြေးဇူးပွုခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။
“ဒှေ ခန်ဓာ ဒှိန်နံ ခန်ဓာနံ အတ်ထိပစ်စယနေပစ်စယော” တဈဖနျ နှဈပါးသောနာမျခန်ဓာက ကနျြနှဈပါးသော နာမျခန်ဓာအား ခဏမခွားကြေး ဇူးပွုခွငျးကိုဆိုလိုပါသညျ။ ပမာအားဖွငျ့ ဝဒေနက်ခန်ဓာနှငျ့ သညာက်ခန်ဓာတို့က ဝိညာဏ်ခန်ဓာကနှငျ့ သင်ျခါရက်ခန်ဓာကို ခဏမခွားကြေး ဇူးပွုခွငျးကိုဆိုလိုပါသညျ။
ဥပမာ လောဘစိတျဖွဈလာပါက လောဘတဈခုတညျးဖွဈသညျဟု ထငျတတျကွပါသညျ။ အမှနျမှာမူ သူနှငျ့ဆိုငျရာ စတေသိကျမြားစှာက အတူတကှ ဖွဈကွပါသညျ။ လောဘမူစိတျ (၈)ပါး ရှိပါသညျ။ ထိုထိုစိတျတို့ ဖွဈတိုငျး စတေသိကျ (၁၈)ပါးမှ (၂၁) ပါးအထိ ဖွဈခှငျ့ရှိ၏။ မောဟမူစိတျ (၂)ပါး ရှိပါသညျ။ ထိုထိုစိတျဖွဈတိုငျး စတေသိကျ (၁၅) ပါးအထိ ဖွဈခှငျ့ရှိပါသညျ။
ထိုလောဘမူစိတျ (၈)ပါး မောဟမူစိတျ(၂)ပါးနှငျ့ ဆိုငျရာဆိုငျရာ စတေသိကျတို့သညျ အပွနျပွနျ အလှနျ လှနျ အတ်ထိသတ်တိနှငျ့ ကြေးဇူးပွုနခွေငျး ဖွဈပါသညျ။ ခန်ဓာတဈပါးက ပစ်စယအကွောငျးဖွဈပါက အခွားနာမျခန်ဓာတို့က ပစ်စယုပ်ပနျအကြိုး ဖွဈသှားပါသညျ။
တဈပါးဟူသညျ မောဟမူစိတျသျောလညျးကောငျး၊ ဖဿသျောလညျးကောငျး၊ ဝဒေနာသျောလညျး ကောငျး၊ သညာသျောလညျးကောငျး ဖွဈပမေညျ။ ဝိပဿနာ၊ သမထတရားမြားအားထုတျပွီး ဉာဏျအဆငျ့၊ ဈာနျ အဆငျ့ မွငျ့မားလာကွသညျ့ ယောဂီမြားက စာပပေရိယတ်တိ၌ လာရှိသညျ့ ဤသဘောကို အနညျးငယျဖွဈ စသေိရှိနိုငျကွပါသညျ။ ပမာအားဖွငျ့ ရှဈပါးသီလဆောကျတညျကွသညျ့ ယောဂီမြားကလညျး သူတို့ ကာလ ရှညျကွာ မကြိုးမပေါကျ မပြောကျမကွားအောငျ ‌ဆောကျတညျလာခဲ့သညျ့ မိမိတို့၏သီလကို အောကျမဆေ့ငျခွငျ လြှငျ စိတျဝယျတသိမျ့သိမျ့ဖွဈကာ ငွိမျးအေးလာသညျကို လကျတှသေိ့ကွပါသညျ။ မတ်ေတာကမ်မဋ်ဌာနျး ရှုပှားနပေါက ကိုယျရောစိတျပါ ငွိမျးအေးလာပါသညျ။ အနုသယကိလသော၏သတ်တိကွောငျ့ ဒေါသစိတျဖွဈသညျနှငျ့ တပွိုငျနကျ တညျး စိတျထဲတှငျသာမက ခန်ဓာကိုယျ၌လညျး ပူလောငျလာသညျကို လကျတှနေ့ားလညျနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
နကျနဲလှနျးပါသညျ။ လောက၌ မွတျစှာဘုရားရှငျသာ မပှငျ့ထှနျးခဲ့ပါက တဈပါးတညျးသာဟု ထငျမှတျယူဆ မိကွမညျမှာ ဧကနျမုခပြတေညျး။ ယခုကဲ့သို့ Presence condition ဖွငျ့ အပွနျအလှနျ အထောကျ အကူပွုနခွေငျး ကိုပငျ အတ်ထိပစ်စညျးဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုခွငျးပတေညျး။
(၂-ဒုတိယ) “စတ်တာရော မဟာဘူတာ အညမညံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော”။ (မဟာဘုတျ ၄-ပါး) (ရုပျက ရုပျကို ကြေးဇူးပွုသညျ)
မဟာဘုတျ ၄-ပါး ရှိပါသညျ။ ပထဝီဟူသညျ “မာတဲ့သဘော၊ ပြော့တဲ့သဘော” တဇေောဟူသညျ “ပူသညျ့ သဘော၊ အေးသညျ့သဘော” အာပေါဟူသညျ “ဖှဲ့စညျးသညျ့သဘော” ဝါယောဟူသညျ “တှနျးကနျ လှုပျရှားသညျ့ သဘော” တို့ကလညျး တဈပါးနှငျ့တဈပါး အပွနျပွနျအလှနျ အမှီသဟဲပွုကာ အတ်ထိပစ်စညျး ဏမနနြညခန ခသညိငအငသည ဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုနပေါသညျ။
“ဧကံ မဟာဘူတံ တိဏ်ဏန်နံ မဟာဘူတာနံ သဟဇာတပစ်စယနေ ပစ်စယော တယောမဟာဘူတာ ဧကဿ မဟာဘူတဿ၊ ဒှမေဟာဘူတာ ဒှိန်နံမဟာဘူတာနံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော”
၁-ကမ်မဇမဟာဘုတျ၊ ၂-စိတ်တဇမဟာဘုတျ၊ ၃-ဥတုဇမဟာဘုတျနှငျ့ ၄-အာဟာရဇမဟာဘုတျ ဟူ၍ လာရှိ ပါသညျ။
သတ်တဝါတို့၏ခန်ဓာ၌ရှိသညျ့ ကမ်မဇပထဝီ၊ ကမ်မဇတဇေော၊ ကမ်မဇဝါယောနှငျ့ ကမ်မဇအာပေါလေးပါးက အပွနျ အလှနျ ကြေးဇူးပွုနပေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကမ်မဇမဟာဘုတျ ဓါတျတဈပါးပါး ခြှတျယှငျးပကျြပွားပါက သနေိုငျသညျ။
ဥတုဇမဟာဘုတျမှာလညျး ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တဇေော၊ ဝါယောတို့ပတေညျး။ အပူ၊ အအေးလှနျကဲ လာပါက ရုပျကဖေါကျပွနျပွီ၊ အပူအအေး မြှတနပေါက ရုပျက ခကျြခွငျး လနျးဆနျးလာတတျပါသညျ။
အာဟာရဇမဟာဘုတျမှာလညျး ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တဇေော၊ ဝါယောတို့ဖွဈပါသညျ။ မိမိ ကွိုကျနှဈ သကျသညျ့ အစာအာဟာရမြား ရှမှေ့ောကျသို့ ရောကျရှိလာပါက အလှနျပငျပွုံးပြျော ကနြေပျသှားခွငျးမှာ အာဟာ ရဇမဟာဘုတျ၏ သတ်တိဖွဈသညျ။ မိမိရောဂါနှငျ့တညျ့သညျ့ ဆေးကိုသောကျသုံးခှငျ့ရလြှငျ ခကျြခငျြးပငျ လနျးဆနျး လာသညျမှာလညျး ထိုနညျးတူ ဖွဈသညျ။ မဟာဘုတျလေးပါးသညျ ရှိနသေညျ့အခိုကျ၌ အပွနျအလှနျ ကြေးဇူးပွု သဖွငျ့ အတ်ထိပစ်စညျးဖွဈ၏။
(၃-တတိယ) “ သွက်ကန်တိက်ခဏေ နာမရူပံ အညမညံ အတ်ထိပစ်စယနေ ပစ်စယော”။ (နာမျရုပျနှဈပါးက နာမျရုပျ နှဈပါးကို ကြေးဇူးပွုသညျ။)
သွက်ကန်တိက်ခဏဟူသညျ ပဋိသန်ဓတေညျခိုကျကို ဆိုလိုပါသညျ။ ဤသို့သန်ဓတေညျသညျ့ ခဏ၌ နာမျနှငျ့ ရုပျတို့သညျ အပွနျအလှနျ သတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုပါသညျ။
ကလလရကွေညျ တညျသညျ့အခိုကျ ဟဒယဝတ်ထုရုပျပါလာသညျ။ ဝတ်ထုဒသက ကလပျပါလာသညျ။ ထို ဟဒယဝတ်ထုရုပျက ပဋိသန်ဓစေိတျ၏ တညျရာမှီရာဝတ်ထုရုပျအဖွဈ ဆောငျရှကျပေးသဖွငျ့ ပဋိသန်ဓစေိတျနှငျ့ ဟဒယ ဝတ်ထုရုပျတို့က သဟဇာတ Born together. ပွိုငျတူ ဖွဈလာကွပါသညျ။
ဘဝ၏အစကနဦး၌ ကံကဖနျတီးပေးလိုကျသညျ့ ရုပျနာမျအစုံ ရှိနသေညျ့အခိုကျတှငျ အပွနျအလှနျ ကြေးဇူး ပွုသောကွာငျ့ အတ်ထိပစ်စညျး ဖွဈပါသညျ။
အမိဝမျးထဲ၌ ပဋိသန်ဓတေညျသညျ့ သတ်တဝါတို့၌ နာမျတရားအဖွဈ ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျစိတျနှငျ့ စတေသိကျ (၃၃)ပါး။ ရုပျတရားအဖွဈ ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ဝတ်ထုဒသကဟူသော ကံကွောငျ့ဖွဈသညျ့ ကမ်မဇရုပျ ကလာပျ သုံးစု (သုံးစညျး ) တို့ တဈပွိုငျနကျ ဖွဈကွပါသညျ။
ကာယဒသက = ကာယပသာဒ ဇီဝီတ အဋ်ဌကလာပျရုပျ ကာယဒသက။
ဘာဝဒသက = ကမ်မဇကလာပျ ကိုးစညျး၌ပါဝငျသညျ့ အထီး အမ ခှဲခွားစသေညျ့ ဣတ်ထိဘာဝ ဒသက ကလာပျ သို့မဟုတျ ပုမ်ဘာဝဒသကကလာပျ ဟူသော ဘာဝဒသက။
ဝတ်ထုဒသက = ဟဒယဝတ်ထုရုပျ ဇီဝိတအဋ်ဌကလာပျရုပျဟူသော ဝတ်ထုဒသကတို့ပတေညျး။ ပဋိ သန်ဓခေဏတှငျ ရုပျနာမျတို့ကလညျး ရှိနသေညျ့အခိုကျ၌ အပွနျအလှနျ ကြေးဇူးပွုသဖွငျ့ အတ်ထိပစ်စညျးဖွဈ၏။
မွတျစှာဘုရားရှငျသညျ ရာဇဂွိုလျမွို့အနီး ဣန်ဒကူဋတောငျ၌ရှိသညျ့ ဣန်ဒကနတျဘီလူး၏ နတျဗိမာနျတှငျ သီတငျးသုံးနတေျောမူစဉျက ဗိမာနျရှငျဖွဈသညျ့ နတျဘီလူးက ဘုရားရှငျထံပါး မေးလြှောကျသညျမှာ –
“အရှငျဘုရား ပှငျ့တျောမူသမြှ ဘုရားအဆူဆူတိုငျးကပဲ ရုပျကို “အသကျ, ဇီဝ, အတ်တဆိုတာ မရှိဘူး” လို့ခညျြး ဟောတျောမူကွပါတယျ၊ ဒါဆိုရငျ ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဒီသတ်တဝါတှဟော ဒီခန်ဓာကိုယျကွီးကို ရရှိနိုငျမလဲ၊ သတ်တဝါတှရေဲ့ အရိုးတှေ၊ အသားဆိုငျတှဆေိုတာကရော ဘယျကနေ ရောကျလာပါသလဲ၊ ဒီသတ်တဝါဟာ ဘာကွောငျ့ တောငျရဲ့လှိုငျခေါငျးသဖှယျဖွဈတဲ့ အမိဝမျးတိုကျမှာ ကိနျးအောငျးနနေိုငျပါသလဲ”ဟု မေးလြှောကျ၏။ (ညှနျး-သဂါထာဝဂ်ဂ၊ ယက်ခသံယုတျ-၂၀၈)
(၁) ပထမံ ကလလံ ဟောတိ = ပထမသတ်တာဟ (ရကျသတ်တပတျ)မှာ ကလလရကွေညျဖွဈတယျ။
(၂) ကလလာ ဟောတိ အဗ်ဗုဒံ = အဲဒီနောကျ ဒုတိယပတျမှာ အမွှုပျကလေးဖွဈတယျ။
(၃) အဗ်ဗုဒါ ဇာယတေ ပသေိ = အဲဒီနောကျ တတိယပတျမှာ နီနီထှေးထှေး အသားတဈကလေး ဖွဈတယျ။
(၄) ပသေိ နိဗ်ဗတ်တတေ ဃနော = အဲဒီနောကျ စတုတ်ထပတျမှာ ခပျမာမာအသားတုံးကလေး ဖွဈလာ တယျ။
(၅) ဃနာ ပသာခါ ဇာယန်တိ = အဲဒီနောကျ ပဉ်စမပတျမှာ ခေါငျး, ခွနှေဈဘကျ၊ လကျနှဈဘကျ ဖွဈမညျ့ နရောငါးခုမှာ ခကျမငါးဖွာလို့ချေါတဲ့ အဖုကလေးငါးခု ဖွဈလာတယျ။
(၆) ကသော လောမာ နခါပိစ = နောကျတော့ ဆံပငျ, မှေးညှငျး, ခွသေညျး, လကျသညျးစတဲ့ အင်ျဂါရပျ အစိတျအပိုငျးတှလေညျး အခါအားလြျောစှာ လူ့အင်ျဂါရပျစုံအောငျ ဖွဈပျေါလာတယျ”ဟု မွတျစှာဘုရားရှငျက မိနျ့ကွားတျောမူပါတယျ။
ဘဝဖွဈတညျမှုအပျေါ ဗုဒ်ဓစာပရှေုထောငျ့နှငျ့ ဆေးသိပ်ပံအမွငျ
ယနဆေ့ေးပညာရှငျမြား အပါအဝငျ လူသားမြားစှာက အမိအဖတို့၏ ဗီဇသှေးနှဈမြိုးတို့ ပေါငျးစပျရာမှ လူဖွဈလာသညျဟု မှတျထငျထားကွပါသညျ။
ဗုဒ်ဓ၏အဘိဓမ်မာကမျြးမြားအလိုအရမှာမူ လူတဈယောကျဘဝတဈခု၌ ပဋိသန်ဓစေတငျ ဖွဈတညျနိုငျရေး အတှကျ (၁) အမိအဖတို့ ဗီဇသှေးနှဈခု ပေါငျးဆုံမိခွငျး၊ (၂) အမိရဲ့သားအိမျက လစဉျ စှနျ့ပဈရမညျ့ ဥတု သှေးညဈတို့ ပယျစှနျ့ သနျ့စငျပွီးခြိနျဖွဈခွငျး၊ (၃) ဘဝဟောငျးမှ ဘဝသဈကို ကူးပွောငျးဖွဈပျေါမညျ့ ဂန်ဓဗ်ဗချေါသညျ့ ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျမြိုးစလေ့ေး ရှေးရှုတညျခွငျးဟူသော အင်ျဂါရပျသုံးပါး စုံညီမှသာ သတ်တဝါတို့၏ ဘဝသဈတဈခု ပဋိသန်ဓနေမှေု စတငျဖွဈပျေါသညျ။
ထိုသုံးပါးထဲက “ဂန်ဓဗ်ဗဓာတျ”ဟူဆိုသော အတိကျကံ၏ သတ်တိအရ ဘဝသဈတဈခုတှငျ ပဋိသန်ဓေ ဖွဈတညျမညျ့ ‘ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျနှငျ့ ကမ်မဇရုပျ’တို့၏ မြိုးစဖွေ့ဈသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျနှငျ့ ကမ်မဇရုပျတို့ကို ဖွဈစနေိုငျသညျ့ ကမ်မသတ်တိဓာတျတဈခုကိုပငျ ဂန်ဓဗ်ဗဓာတျဟု ဆိုလိုပါသညျ။ ဂန်ဓဗ်ဗဓာတျ၌ ကံပါရမီ တို့၏ သတ်တိသညျလညျးကောငျး၊ ကံကောငျးခွငျး၊ ဉာဏျကောငျးခွငျးတို့၏ အခွခေံတို့သညျလညျးကောငျး ပါဝငျ၏။
အမိအဖတို့၏ ဗီဇသှေးနှဈခု၊ ဂန်ဓဗ်ဗဓာတျနှငျ့ စငျကွယျသညျ့ အမိ၏သားအိမျဟူသော အကွောငျးတရားတို့ ဆုံမိသညျနှငျ့ ပဋိသန်ဓဖွေဈခြိနျတှငျ နာမျတရားအဖွဈ ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျစိတျနှငျ့ စတေသိကျ (၃၃)ပါး၊ ရုပျတရား အဖွဈ ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ဝတ်ထုဒသကဟူသော ကမ်မဇရုပျ ကလာပျသုံးစုတို့ တဈပွိုငျနကျတညျး ဖွဈကွ ပါသညျ။
ပဋိသန်ဓစေိတျကလေး ‘ဥပါဒျ’ပွီး ‘ဌီ’ ဟူသောအခိုကျကို ရောကျခြိနျကစပွီး ဥတုကွောငျ့ဖွဈသညျ့ ဥတုဇရုပျ တို့ကလညျး ခဏမစဲ စိတျတဈခဏ အခြိနျတိုငျး၌ မပွတျတရစပျ ဖွဈနပေါသညျ။ ပဋိသန်ဓေ နောငျ ပထမ ဘဝငျစိတျ ကလေး စဖွဈခြိနျကစပွီး စိတျကွောငျ့ဖွဈသညျ့ စိတ်တဇရုပျတို့လညျး ဖွဈလာပါသညျ။
ပထမဆုံး ပဋိသန်ဓစေပွီး ဖွဈခြိနျမှသညျ ရကျသတ်တတဈပတျစာအခြိနျအတှငျး၌ သန်ဓသေားဟူသော ကလလရကွေညျ ကလေးမြှပငျပဲ ရှိပါသေးသညျ။ အရှယျပမာဏကလညျး ဝမျးတှငျးမှေး ဆိတျသားငယျ၏ အမှေးမြှငျကလေးတဈခြောငျးကို ဆီထဲနှဈပွီး ခါထုတျလိုကျသောအခါ ထိုအမှေးမြှငျလေး၏ထိပျ၌ ကပျကနျြနမေညျ့ ဆီကွညျ ပမာဏမြှလောကျသာရှိ၏။
သို့သျော ထိုသဘာဝသတ်တိတှငျ ဘဝငျစိတျနှငျ့ စတေသိကျဟူသော နာမျတရားမြား၊ ကမ်မဇရုပျ၊ ဥတုဇရုပျ၊ စိတ်တဇရုပျဟူသော ရုပျသုံးပါးရှိနေ၏။
ထို့နောကျ ဒုတိယ ရကျသတ်တပတျရောကျသောအခါ ဆီကွညျကလေးမှသညျ “အမွှုပျ” ကလေးအဖွဈ ပွောငျးလာသညျ။ ဤအခြိနျအထိလညျး ရုပျက အထကျ၌ပွခဲ့သညျ့ သုံးပါးသာ ရှိသေးသညျ။
တတိယ ရကျသတ်တပတျရောကျသောအခါ အမွှုပျကလေးမှသညျ သှေးနီခဲလေး “သားတဈ” ဖွဈလာသညျ။ သားတဈဆိုသျောလညျး အသားတုံးပမာ မာမာခဲခဲ မဟုတျသေးဘဲ၊ ဂယျြလီပမာ သှေးပဈြခဲခဲလေးသာ ရှိသေး သညျ။ ဤတတိယပတျရောကျသောအခါ မိခငျစားသောကျသညျ့ အစားအစာမြားကတဈဆငျ့ရသညျ့ သွဇာဓာတျက သန်ဓသေားလောငျးအတှကျ အာဟာရဇရုပျ စတငျဖွဈလသေညျ။
ထိုကာလမှစ၍ ရုပျလေးမြိုးစုံပွီး၊ ကံ၊ စိတျ၊ ဥတု၊ အာဟာရအကွောငျးတရားလေးမြိုးလုံး ပေါငျးဆုံမိပွီဖွဈ သကဲ့သို့ အာဟာရလေးမြိုးလုံးလညျး ပွညျ့စုံလာပါသညျ။ (အာဟာရလေးမြိုးဟူသညျ ၁။ အတိတျကံစတေနာက စတေနာဟာရ ၂။ ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျက ဝိညာဏာဟာရ ၃။ အာရုံနှငျ့ တှထေိ့တာက ဖဿာဟာရ ၄။ မိခငျ ထံပါးကရသညျ့ သွဇာဓာတျက ရုပျအာဟာရတို့ ဖွဈပါသညျ။)
ထမငျးလုတျ၊ ဟငျးလုတျထဲ၌ပါသညျ့ သွဇာဓာတျကလေးမြားက အာဟာရဇရုပျကို ဖွဈစတေတျသညျ့ ဇနကသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုပေးပါသညျ။ ကမ်မဇရုပျ၊ စိတ်တဇရုပျ၊ ဥတုဇရုပျတို့က ဥပထမ်ဘကသတ်တိဖွငျ့ ထောကျပံ့ ကူညီပေးပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ “ကဗဠီကာရော အာဟာရော = သွဇာဟုချေါသော အာဟာရဓာတျကလေးသညျ။ ဣမဿ ကာယဿ = ဤခန်ဓာကိုယျကွီးတဈခုလုံး (ရုပျလေးမြိုးလုံး)ကို။ အာဟာရပစ်စယနေ ပစ်စယော = အာဟာရသတ်တိဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုခွငျးပတေညျး။”
စတုတ်ထပတျတှငျ အဆိုငျအခဲ ခပျမာမာကလေး ဖွဈလာသညျ။
ပဉ်စမပတျတှငျ ခကျမငါးဖွာ (ခေါငျး၊ လကျနှဈဘကျ၊ ခွနှေဈဘကျ) ဖွဈနိုငျရနျအတှကျ အဖုလေး ငါးဖု ပျေါလာပါသညျ။
ထို့နောကျ ရကျသတ်တ (၇)ပတျမွောကျခနျ့ကစပွီး မကျြစေ့၊ နား၊ နှာစသညျ့ အင်ျဂါတို့ ပျေါပေါကျလာသညျ။ ရကျသတ်တ(၁၁)ပတျခနျ့ရောကျခြိနျတှငျ ဆံပငျ၊ မှေးညှငျး၊ ခွသေညျး၊ လကျသညျးတို့ပါ စုံလငျလာတော့သညျ။
( ညှနျး – ဓမ်မဘရေီအရှငျဝီရိယ (တောငျစှနျး) လူတိုငျးအတှကျ ပဋ်ဌာနျး)
၈ – နိဿယပစ်စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (6 of 8)